ဓမ္မအမှုတော်အစည်းအဝေးကျင်းပပုံ- တမန်တော် အခန်း ၁၅ အရ- စစ်မှန်သောကျမ်းစာအယူဝါဒ
တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း ၁၅ ပါ ၀ န်ကြီးတစ် ဦး ၏အစည်းအဝေးကိုမည်သို့ကျင်းပရမည်နည်း
ေမ ၇၊ ၂၀၂၁ အကြွင်းမဲ့၊ ၂၀၁၉ by ထုတ်ဝေသူ
တမန်တော် 15 တွင်ကျင်းပသည့်ဝန်ကြီး၏အစည်းအဝေးကိုမည်သူမဆိုသိပါသလား။
အဲဒီလိုဆိုရင် မင်းကို ငါ ရိုးသားစွာ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လို အထူးကောင်းချီးတွေ ထွက်လာလဲလို့ မေးချင်ပါတယ်။
စကားမစပ်၊ တမန်တော်အစည်းအဝေးအတွက် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့် တစ်ခုတည်းသောဥပမာများကို တမန်တော် 2၊ တမန်တော် 15 နှင့် တမန်တော် 20 တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အဆိုပါသုံးမျိုးတွင်- တမန်တော် 15 သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့်ကိစ္စများကို လေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးနည်းကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အား ဖြေရှင်းရန် ခွင့်ပြုနိုင်သေးသည်။
တမန်တော် 15 တွင်၊ ဂျူးများနှင့် လူမျိုးခြားများကြား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခြားနားချက်သည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ယနေ့ အသင်းတော်ဟု ခေါ်ဆိုသူများကြားတွင် မည်သို့ပင်ကွဲပြားစေကာမူ အသေးအဖွဲဟု ထင်မြင်စေပါသည်။
တမန်တော် 15 တွင်ဓမ္မအမှုဆောင်အစည်းအဝေး၏အဆုံးရလဒ်- ပညတ်တရား၏ငှားရမ်းနေထိုင်သူ 600+ ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေသောခရစ်ယာန်ဂျူးများနှင့် မောရှေပညတ်ကို ခရစ်တော်နောက်သို့မလိုက်ရသေးသည့်ခရစ်ယာန်လူမျိုးခြားများဖြစ်ကြသည်- သူတို့အားလုံးသည် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ အံ့သြဖွယ်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား အလားတူလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါသလား။
ထို့ကြောင့် (၁) တမန်တော်များနှင့် တပည့်များသည် ဤကဲ့သို့ ထူးထူးခြားခြား ကောက်ချက်ချကာ အစီအစဉ်တကျ မည်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသနည်း၊ (၂) ယင်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
(၁) တမန်တော်များနှင့် တပည့်များသည် ဤမျှထူးခြားသော ကောက်ချက်ချမှုနှင့် အစီအစဉ်ကို မည်သို့ရောက်လာသနည်း။
တမန်တော် 15 တွင် ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ယနေ့ သူတို့လုပ်လေ့ရှိသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးများသည် ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော “မှန်ကန်သော” အနေအထားဖြစ်သင့်သည်ဟု သူတို့ထင်မြင်ကြောင်း တရားမျှတစေရန် သွန်သင်ချက်များအတွက် ကျမ်းချက်များကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ ထိုအချိန်က ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို မရေးရသေးသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏မှတ်တမ်းကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်-
တမန်တော်များနှင့် တပည့်များအား ယေရှုသွန်သင်ပေးခဲ့သော အမှတ်ရစရာများ
လူမျိုးခြားများ ဥပဒေကို လိုက်နာရန် မလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပကတိနည်းဖြင့် ဤအရာများအားလုံးကို သွန်သင်ဆုံးမထားသည်။ တကယ်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ၊ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အကြောင်းမူကား၊
“ပညတ္တိကျမ်း၊ ပရောဖက်များကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ငါလာသည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ငါလာသည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်မှီတိုင်အောင်၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့သည် ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်၊ ပညတ်တရားနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍၊ ထိုကြောင့် အကြင်သူသည် ဤအနည်းဆုံးပညတ်တော်တို့ကို ဖောက်ဖျက်၍ လူတို့ကို ဆုံးမသွန်သင်လျှင် ထိုသူကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အငယ်ဆုံးဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသော်လည်း၊ အကြင်သူသည် ကျင့်ကြံသွန်သင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ ကြီးမြတ်သောဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်။” ~ မဿဲ ၅:၁၇-၁၉
“ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ရည်မှန်းထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ မလိုအပ်ပါ။” သင်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံး၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁၅ နှစ်ခန့်) ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဥပဒေကို ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်ပြီး လူမျိုးခြားများလည်း ရှိသင့်သည်ဟု ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ခဲ့ကြသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် မရရှိခဲ့ကြပေ။
ယေရှုသည် ထိုပြဿနာကို ပြတ်သားစွာ မဖြေရှင်းခဲ့ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သာလျှင် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အား ဉာဏ်အလင်းပေးနိုင်မည့် နိယာမတစ်ခုကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက အချိန်မှန်၊ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ၊ လိုအပ်တာဖြစ်မှာပါ။
“မင်းကို ငါပြောစရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခု မင်းမခံနိုင်ဘူး။ သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်တော် ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ သမ္မာတရားအလုံးစုံတို့၌ သင်တို့ကို လမ်းညွှန်တော်မူလိမ့်မည်။ သူကြားသမျှကို ပြောရမည်၊ နောင်လာလတံ့သောအရာတို့ကို ပြလိမ့်မည်။ ~ ယောဟန် ၁၆:၁၂-၁၃
၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝခြင်းမရှိသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် အကြီးမြတ်ဆုံးပြန်လည်နိုးထချိန်အတွင်း 15 နှစ်ခန့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဘိသိက်ပေးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ ဒါပေမယ့် အခုထိ နားမလည်သေးဘူး။.
ထို့ကြောင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အား ဤမူအရ မည်သို့အလင်းပေးခဲ့သနည်း၊ တမန်တော် ၁၅ ၏ဓမ္မအမှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းတို့အား မည်သို့တင်ပြခဲ့သနည်း။
ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ကျမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာအငြင်းအခုံဖြစ်ပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ပေတရုသည် မတ်တပ်ထရပ်ကာ “မောရှေပညတ်ကို မလိုက်နာသူများ၏အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ပြောပြပါရစေ။”
ပထမအချက်မှာ၊ တမန်တော်များနှင့် တပည့်များအားလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို နာခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်ဂရုစိုက်ကြပြီး နှစ်သက်တော်မူသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်ထံမှ သင်ယူကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့လူတို့ကို လှည့်ဖြားခဲ့သော “ပင်တေကုတ္တေ” ဝိညာဉ်အတုများစွာကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နေသနည်းဟု ကျွန်ုပ်တို့မေးရန် ကြောက်ရွံ့နေသလော။
ယနေ့ လူတို့၏အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်နေသောအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ဂရုစိုက်ပါသလော။ သို့ဆိုလျှင်၊ အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် “ခွင့်ပြုသည် သို့မဟုတ် ခွင့်မပြုသင့်” နှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့၏အသက်တာတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်နေပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းဖူးပါသလား။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နားလည်မှုကိုသာ အားကိုးနိုင်စေရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတော်စင်၏အသက်တာတွင် ကြာမြင့်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ပျက်ကွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသလား။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကွဲပြားခြားနားသော သူတော်စင်များစွာတွင် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကွာခြားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာခဏ အာရုံစိုက်လိုစိတ်မရှိကြပါ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူ၏ထင်မြင်ချက်ကို အကြိမ်များစွာဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ သမိုင်းတစ်လျှောက် ပြဿနာများစွာနှင့်ပတ်သက်ပြီး- လူတို့၌ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောအမှုတော်အားဖြင့်၊ နားထောင်ဖို့ သင်ယူဖို့ ဂရုစိုက်တဲ့သူရှိလား။
ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ ပေတရုလိုပြောခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ယောက် သိပါသလား။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်ကင်းစင်သောလူများကို မည်သို့အသုံးပြုခဲ့သည်ကို သက်သေခံခဲ့သော ဓမ္မဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားသူများထက် ခြားနားသော သွန်သင်ချက် သို့မဟုတ် စံနှုန်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် ဓမ္မဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ တမန်တော် 15 တွင် သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် လုပ်ဆောင်နေပုံအကြောင်း နောက်ထပ်လေ့လာရန် ကျန်အမှုဆောင်များသည် စေ့စေ့နားထောင်ပါသလော။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုးကို သိရင် ပြောပြပေးပါ။ ငါတကယ်သိချင်တယ်!
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က မောရှေပညတ်ကို လိုက်နာသူတွေရော၊ မလိုက်နာသူတွေရော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါ သိပ်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ်လား။ ၁ ကောရိန္သု ၁၂:၄-၇ တွင် တမန်တော်ပေါလုပြောခဲ့သောစကား မဟုတ်လား။
“ယခုအခါ လက်ဆောင်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း တူညီသောဝိညာဉ်တော်ရှိသည်။ အုပ်ချုပ်မှု ကွဲပြားသော်လည်း သခင်ဘုရားသည် တူညီသည်။ လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း အလုံးစုံတို့ကို လုပ်ဆောင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် တစ်ခုတည်းသောဘုရားဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ထင်ရှားခြင်းမူကား၊ အကျိုးအမြတ်အလို့ငှာ လူတိုင်းအား ပေးတော်မူ၏။” ~ ၁ ကော ၁၂:၄-၇
အခြားတစ်ခုထက် လက်ဆောင်ပိုပေးသော ဓမ္မဆရာတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်သက်သလော၊ သို့မဟုတ် ထိုလက်ဆောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုသုံးလေ့ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုဆောင်များအားလုံးကို တူညီသောလေးစားမှုဖြင့် ဆက်ဆံသင့်ပါသလား။
မတူညီသောဒေသခံအသင်းတော်များအကြား ဧဝံဂေလိတရားအုပ်ချုပ်မှုတွင် ကွဲပြားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုပါသလော။
ကျွန်ုပ်တို့သည် (ယုဒလူမျိုးများနှင့် လူမျိုးခြားများကဲ့သို့) ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး မိတ်သဟာယဖွဲ့ဆဲဖြစ်နိုင်ပါသလား။
နာခံမှုရှိပြီး သန့်ရှင်းစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်အတိုင်း မိမိတို့၏အယူဝါဒကို နားလည်သဘောပေါက်မှု မရှင်းလင်းပါက အခြားသော ဓမ္မဆရာနှင့် မိတ်သဟာယပြုနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် “စုံလင်သောနားလည်မှု၏မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း” ဟူသော အမှတ်သညာအသစ်ကို လက်ခံရရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်ပစ်မည်လော။
“ဆေးကြောထားတဲ့ သွေးတိုင်းအတွက် မိတ်သဟာယဖွဲ့ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လက်ကို လှမ်းကိုင်တယ်။ မေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ပြည့်စုံစေသော နှလုံးသားတစ်ခုစီကို ဝန်းရံထားသော်လည်း!”
ယင်းက ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမေးခွန်းအချို့ကို ပေါ်ပေါက်စေသည်-
ဘုရားသခင့်အလိုတော်အတွက် သွေးဆေးကြောပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသုံးပြုခြင်းမှာ လုံလောက်သေးသလား။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ထင်မြင်ယူဆခြင်းမရှိသောသူများမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ပါက၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် လုံး၀မသက်ဆိုင်ပါလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထက် သာ၍ပညာရှိသလော။
(၂) အလုပ်ဖြစ်မြောက်စေသော ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
သို့သော် ဂျူးများနှင့် လူမျိုးခြားများကို ခရစ်ယာန်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍ ပေတရု၏ကြေငြာချက်ထက် ပိုယူခဲ့ရသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုတော်အတွက် လူသိရှင်ကြားရပ်တည်ရန် သိုးစုအတွက် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအများဆုံးခံရနိုင်ခြေရှိသော ဂျူးသင်းအုပ်ဆရာကို ယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဂျိမ်းစ်သည် ရဲရင့်စွာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး စကားပြောရတော့သည်။
“သူတို့ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပြီးမှ၊ ယာကုပ်က၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ကြလော့။ ဘုရားသခင်သည် မိမိနာမတော်အတွက် လူတို့ကို နှုတ်ဆောင်ခြင်းငှာ ရှေးဦးစွာ ဘုရားသခင်သည် လူမျိုးခြားတို့ကို အဦးစွာ အကြည့်အရှုပြုတော်မူကြောင်းကို ရှိမောင်သည် ဟောပြော၏။ ပရောဖက်တို့၏စကားသည် သဘောတူ၍၊ ဤနောက်မှ ငါပြန်လာ၍ ပြိုလဲသော ဒါဝိဒ်၏တဲတော်ကို တဖန်တည်စေမည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ၊ ကြွင်းသောလူတို့သည် ထာဝရဘုရားကို၎င်း၊ ငါ့နာမဖြင့် သမုတ်သော တပါးအမျိုးသား အပေါင်းတို့ကို၎င်း ရှာစေခြင်းငှါ၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို ပြုတော်မူသော ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်အလုံးစုံတို့ကို သိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်၊ တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ လှည့်သွားသော သူတို့ကို မနှောင့်ယှက်စေနှင့်ဟု ငါ့စီရင်ချက်ဟူမူကား၊ ရုပ်တုဆင်းတု၏ညစ်ညမ်းမှု၊ မတရားမေထုန်ပြုမှု၊ လည်ပင်းညှစ်သွေးဆောင်မှုတို့မှ ကြဉ်ရှောင်ကြမည်အကြောင်း၊ ~ တမန်တော် ၁၅:၁၃-၂၀
ယာကုပ်သည် အရာသုံးခုကို ပြုခဲ့သည်။
1. လူမျိုးခြားများနှင့်အတူ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုအကြောင်း ပေတရု၏မှတ်တမ်းကို နားထောင်ခြင်းဖြင့်၊ ယာကုပ်သည် လူတို့၏အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို သဘောတူရန် ပရောဖက်ပြုချက်တွင် သွန်သင်ထားသည့်နိယာမကို ယာကုပ်အနက်ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ကို စွန့်ရမှာ။
၂။ လူမျိုးခြားများထံမှ သူတောင်းဆိုသည့်အရာသည် အယူမှားဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံတွင် တစ်ပါးအမျိုးသားများကို စားသုံးခြင်းမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားထားသကဲ့သို့ မောရှေပညတ်နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သူ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ “သူတို့အထဲမှ ထွက်၍ သီးခြားနေကြလော့။” “သင်သည် ဂျူးလူမျိုးအုပ်စုကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်” မဟုတ်ပါ။ (တခါတရံတွင် ဤဖော်ပြချက်နှစ်ခုကို ယနေ့ခေတ်တွင် ရောနှောထားသည်။ ဒုတိယဖော်ပြချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်၊ မည်သည့်အုပ်စုနှင့်မျှမတူပေ။)
3. ယာကုပ်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမေတ္တာ၏ ဓမ္မအမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဂျူးများ၏ အဓိကခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်၊ သူသည် ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိရှိခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သူ၏သိုးစုသည် ဘုရားသခင်အလိုရှိသောလမ်းညွှန်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျိမ်းစ်သည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ ခရစ်တော်ကို ကတိထားရာ မေရှိယအဖြစ် ဂျူးများက ယုံကြည်သောကြောင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းသည် ဆိုးရွားလှသည်။ သို့သော် လူတို့သည် ပညတ်တရားမပါဘဲ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုခြင်းသည် ကျန်မယုံကြည်သူဂျူးများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းပင်။ ယာကုပ်သည် ဂျူးယုံကြည်သူအားလုံး၏ ဘေးကင်းရေးကို စွန့်စားခဲ့သည်။ သူသည် ဒေသခံသိုးစုများ၏ ဘေးကင်းမှုကို စိတ်နှလုံးတွင်ရှိသော်လည်း၊ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ လုံခြုံရေးနှင့် သူတာဝန်ယူရသော သိုးစုထက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးကောင်းကျိုးအတွက် မိမိလုံခြုံရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ခရစ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဂုဏ်တင်လိုစိတ်ရှိခဲ့သည်– “သန့်ရှင်းသောအဘ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ပေးတော်မူသောသူတို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ” (ယော ၁၇:၁၁)
မှတ်ချက်- ယာကုပ်နှင့် ဂျူးခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိစဉ် တမန်တော်များအားလုံးနည်းတူ မောရှေပညတ်ကို ဝီရိယရှိရှိ လိုက်နာဆဲဖြစ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရောက်သောအခါ မောရှေပညတ်ကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာကြောင်းကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ သို့ရာတွင်၊ သူတို့သည် တပါးအမျိုးသားတို့၏မောရှေပညတ်ကို မတောင်းဆိုကြသေးဘဲ၊ တပါးအမျိုးသားတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။
“ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဉာဏ်​ပညာ​နှင့်​အ​သိ​ပ​ညာ​နှစ်​ခု​တို့​၏​စည်း​စိမ်​၏​နက်​နဲ​သော​အ​နက်၊ စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူချက်တို့သည် မည်မျှပင် မရှာဖွေနိုင်ဘဲ၊ ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်ကို အဘယ်သူသိသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အတိုင်ပင်ခံက ဘယ်သူလဲ။” ~ ရောမ ၁၁:၃၃-၃၄
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အမှန်တကယ်သိချင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ မူရင်းမေးခွန်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်၊ တမန်တော်2တွင် သူတို့အားလုံး တညီတညွတ်တည်းရှိကြပြီး တစ်နေရာတည်းတွင် ဆုတောင်းခြင်းအစည်းအဝေးသည် တမန်တော် 15 အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ရောက်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ တမန်တော်2အစည်းအဝေးကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြန်လည်နိုးထမှုတစ်ခု မရရှိနိုင်ခင်မှာ နောက်ထပ် တမန်တော် 15 အစည်းအဝေးတစ်ခု ရှိသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ အားလုံးက သဘောတူညီချက်မရသေးလို့ပါပဲ။
တမန်တော် 15 ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကိုသင်ဆန္ဒရှိပါသလား။
“တံတိုင်းတွေကို ဖြိုဖျက်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ” တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်သောနံရံများသည် ကယ်တင်ခြင်း၏နံရံများဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်၏အသွေးတော်မှသာလျှင် ထိုနံရံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဘုရားရဲ့လူအစစ်တွေကြားက နံရံတိုင်းကို သူတော်စင်တိုင်း ကြွေကျဖို့ နေရာတိုင်းမှာ စိတ်ထက်သန်စွာ ဆုတောင်းဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ငါယုံကြည်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ တောင့်တပါက၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်လမ်း၌ မည်သူမျှ မရပ်တည်နိုင်ပါ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၈ ၏ ကြီးစွာသော နိုးထမှုကြီးကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ယဇ်ပလ္လင်တစ်ခုတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူတကွ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ စုရုံးမနေပါက ဝိညာဉ်ရေးတိတ်ဆိတ်မှုကို မည်သည့်အခါမျှ ချိုးဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။ တမန်တော် 15 တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း မလိုက်နာပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတွင် လိုက်နာရန်နှင့် နာခံရန် အပါအဝင် သမ္မာကျမ်းစာအားလုံးကို ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ စည်းလုံးခြင်းသည် လူများစွာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စွန့်လွှတ်လိုက်သော ခက်ခဲသောအပိုင်းဖြစ်သည်။
မိတ်သဟာယဖွဲ့နေထိုင်ရန် လိုအပ်သော ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုသို့ လူတို့ကိုပို့ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ကို “မနိုးထ” မီ ဆိုးသွမ်းမှုမည်မျှပို၍လွတ်လပ်မှုရှိသနည်း။
“ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအားဖြင့် သင်တို့အား စကားမပြောနိုင်ဘဲ၊ ခရစ်တော်၌ရှိသော သူငယ်များကဲ့သို့ပင်၊ ငါသည်သင်တို့ကို အသားနှင့်မကျွေးဘဲ၊ နို့နှင့်ကျွေးပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ယခုတိုင်အောင် သည်းမခံနိုင်ကြသေး။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဖြစ်သေး၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့တွင် ငြူစူခြင်း၊ ရန်တွေ့ခြင်း၊ ကွဲပြားခြင်းရှိသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိအတိုင်း ကျင့်ကြသည်မဟုတ်လော။ ~ ၁ ကောရိန္သု ၃:၁-၃
ကွဲကွာနေသောလူများသည် ရှေ့ရှိအရာများကို မရှင်သန်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နောက်သို့ လိုက်ရန် သင်ယူကြသည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ရှိခြင်းမရှိသောအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏နောက်ဆုံးပြန်လည်နိုးကြားမှုကို ယူဆောင်လာရန်အတွက် သန့်ရှင်းပြီး စည်းလုံးသောလူများကို ကိုယ်တော်အလိုရှိတော်မူ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်လား။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းချက်၏အဖြေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် နှိမ့်ချပြီးဆန္ဒရှိပါသလော– “ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သူတို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်မည်အကြောင်း” ဖြစ်သလော။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူ လမ်းခရီးရှိပါစေ။
အမျိုးအစားများ ဝန်ကြီးဌာနအကြောင်း Tags များ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပို့စ်ညွှန်း
သမ္မာကျမ်းစာပါ မှတ်တမ်းသည် စစ်မှန်ပြီး သစ္စာစောင့်သိသည်။
ဂိုဏ်းဂဏများနှင့် ကွဲပြားသောအုပ်စုများကို ကျော်လွှားခြင်း - ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ယေရှု၏နေ့ရက်များ
Miangeni Academy မှ အမေး၊ ခေါင်းစဉ်များနှင့် အဖြေများ (အပိုင်း ၅)
Miangeni Academy မှ အမေး၊ ခေါင်းစဉ်များနှင့် အဖြေများ (အပိုင်း ၄)